Istaraatijiyaadka Cilmi-baarista Isticmaalka Soodhawrka Shabakadda
Webka xoqidda ayaa ku lug leh ficil ahaan ururinta xogta bogagga adoo isticmaalaya web. Dadku waxay isticmaalaan aaladaha xogta macluumaadka boggaga si ay u helaan macluumaad qiimo leh oo laga helo bogga internetka kaas oo diyaar u ah in loo dhoofiyo agab kale oo kaydka deegaanka ah ama xogta fog. Qalabka sawir-qaadaha ee webka waa qalab kaas oo loo isticmaali karo in lagu gurguuro oo laga soo qaado macluumaadka boggaga sida qaybaha alaabta, bogga oo dhan (ama qaybo), content iyo sidoo kale sawirro. Waxaad awoodi kartaa inaad ka hesho wax website ah oo ka socda goob kale oo aan lahayn API rasmi ah oo lagula tacaalayo xogtaada - casino freespin.
Qodobkan SEO, waxaa jira mabaadi'da aasaasiga ah kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabkan feylka macluumaadka bogagga. Waxaad awoodi kartaa inaad barato habka caaradu u sameyso geeddi socodka gurguuridda si loo kaydiyo xogta bogga qaab habaysan oo loogu talagalay ururinta macluumaadka bogagga. Waxaan tixgelin doonaa bogga shabakada internetka BrickSet aaladda. Macluumaadkan waa bog bulsho ku dhisan oo ku salaysan macluumaad badan oo ku saabsan qaababka LEGO. Waa inaad awood u yeelatid inaad sameysid qalab wax ku ool ah oo Python ah oo u safraya shabakada BrickSet oo keydso macluumaadka sida macluumaadka ku qoran shaashaddaada. Warshaddan shabakadan waa la ballaadhin karaa oo waxay ku dari kartaa isbeddelada mustaqbalka ee hawlgalka.
Mid ka mid ah samaynta waraaqaha shabakadda Python, waxaad u baahantahay jawi horumarineed oo loogu talagalay Python 3. Deegaanka runtime waa Python API ama Qalabka Horumarinta Barnaamijka si loo sameeyo qaar ka mid ah qeybaha muhiimka ah ee software crawler web. Waxaa jira dhowr tallaabo oo qofku raaci karo marka la sameynayo qalabkan:
Abuurista waraaqaha aasaasiga ah
Marxaladdan, waxaad u baahan tahay inaad hesho bogag websaydh ah si nidaamsan. Halkan waxaad ka heli kartaa bogagga shabakadda iyo soo saar macluumaadka aad rabto iyaga. Luqadaha barnaamijyada kala duwan waxay awoodi karaan inay ku gaaraan waxtarkan. Duufaantu waa inay awood u yeelato inay muujiso in ka badan hal bog oo isku mar ah, iyo sidoo kale inay awood u leeyihiin inay ku badbaadiyaan xogta siyaabo kala duwan.
Waxaad u baahan tahay inaad qaadato fasalka baakidhka ee taraafigaaga. Tusaale ahaan, nooca caanka ah waa brickset_spider.
Tani waxay abuureysaa buug cusub. Waxaad u raaci kartaa adigoo isticmaali kara amarrada kale sida taabashada taabashada sidan soo socota:
taabasho xoqan. py